महिला हिंसा सन्दर्भमा-Nagarikaawaj.com
महिला हिंसा सन्दर्भमा
आइतवार, भदौ १, २०७१
ह्जिो आज मुलुकका विभिन्न भागमा मह्लिा माथि भएको हिंसाका घटनाले पत्रिकाहरुका पाना भरिएको पाइन्छ । तर पनि हामी सबै थाह पाए पनि नपाएझैँ चुुपचाप लागेर बस्छौ । यो हाम्रो समाज को नराम्रो पक्ष नै भइसकेको छ । हाम्रो समाजमा महिलाहरु खास गरी दाईजोको नाममा कतै बहुुविवाहको नाममा कतै बोक्सीको नाममा जघन्य हिंसा भैरहेको छ। यसरी हाम्रो समाजको परम्पराका आडमा धर्मकर्मका बाहानामा वंशको अधिकारका विषयमा तथा सामाजिक मर्यादा एवं जातीयताका आधारमा समेत महिला माथि हिंसा भैरहेको छ । यस्ता घटना हुनु सभ्य समाजका लागी कलंक हो । महिला माथि हुने हत्या हिंसा जस्ता घटनाले सभ्य समाजका सभ्य मानव माथिे दाग लगाउछन् ।त्यसैले त्यस्ता घटनाहरु नियन्त्रण गर्न सबै तह र तप्काबाट उतिकै क्रियासिलता
देखाउनु आवश्यक छ। यसका लागी एकल प्रयास भन्दा सामूह्कि प्रयास समस्या को समाधान हुन् सक्छ । जागरणको लहर ल्याएर त्यस्ता घटना कम गर्न राज्य, राजनितिक दल, गैरसरकारी संस्था सबै चेतना मूलक कार्यक्रममा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
आन्तरिम संविधान धारा २०–३० मा कुनै पनि महिला विरुद्ध शारीरिक मान्सिक वा अन्य कुनै हिंसाजन्य कार्य गरिने छैन् र त्यस्ता कार्य कानुन बाट दण्डनीय हुने छ भनेर किटान गरिएको छ । सरकारले दाइजो अन्त्य गर्न घोषण गरेको दुई वर्ष पुगिसकेको छ । यधापि मह्लिा अधिकारको कानुन प्रतिबद्धताका चाङहरु एकपछि अर्का गदै थुप्रिदै गए पनि महिला विरुद्ध हुने हिंसा रोकिएको छैनन् । रुढिवादी संसार एवं संस्कृतिले धर्म परम्पराको नाममा हामीलाई जे सिकाएका छन् , त्यस्को निरन्तरता अन्धानुकरण हाम्रो एक मात्र अभीष्ट बनिरहेको छ । समाज विडम्बनामै बाँचिरहेको छ । नारी (देवी) ले दुष्ट प्रवृति (दैत्य) को संहार गर्छिन यो सत्य हो । र यही शास्त्रमा घोकिन्छ पनि तर विडम्बना आफ्नै घरपरिवार र समाजमा रहेकी नारीलाइ निर्बल निमुखा तथा निम्घरो मनिन्छ । कानुनको मसी सुक्न नपाउदै किन उल्लघनको श्रृखंला सुरु हुन्छ ? बडाहरुको कुकुर हराउँदा रातदिन लगाएर खोज्ने प्रशासनले सामान्य महिला माथि हिंसा गर्न अपराधीलाई समातेर कारबाही गर्न सक्दैन। अझ लाजमर्दो कुरा आफृलाई शिक्षित अधिकारवादी तथा गन्यमान्य भन्ने ठालु पुरुषहरुबाटै आफ्नै घरका श्रीमती , बुहारीहरु पीडित हुनुपर्छ । पुरुषहरुलाई मात्र धारे हात लगाएर पीडकको घानमा हालिदिने प्रवृत्तिले महिला भनेकै पीडितकै बथान हुन् भन्ने मान्यता छ । गरीबी र विभेदको जाँतोमा दलिएर हजारौ महिला खाडीमा मरुभूमीमा जोतिनु परेको ,भारतको वेश्यालय चहार्नु परेको छ।
महिला हिंसा घटनाहरु कम आउनुको साटो दिनका दिन वृद्धि भैरहेको छ। लाग्छ पुरुष जातिले संयुक्त राष्ट्संघको नारी हिंसा उन्मूलन अभियानलाई ख्यालठट्टा सम्झेर नारी माथि शोषण बढाइरहेका छन् ।नारी माथि बलात्कार हत्या शारीरिक यातनाको सिलसिलाले आज हरेकलाई स्तब्ध बनाएको छ। नरी हिंसा का घटनाहरु क्रुरता र शोषणको वीभस रुप लिदेै छन्। नारी पहिले पनि सोसित थिए । तर पहिले यस प्रकारका घटनाका कमेै जानकारी हामी सम्म आउँथे नारीको संसार र कार्य क्षत्र घरभित्रै सिमित थियो । आजका नारी हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने प्रयास गरिहेका छन् र सफल पनि भयका छन् । नारी बीसौ शताब्दीमा जति उन्नति तर्फ अग्रसर हुदैछन् । पुरुषको अत्याचार पनि त्यतिनै मात्रामा बडिरहेको छ । यधापि नारी शोषणका विषयमा प्राय हरेक समाजमा एउटै मनोवृति भेटिन्छ । नारी शोषण विश्वको प्रत्यक समाजमा विधमान छ। नारी माथि हुने हिंसा संसारको सबै भन्दा अदिम हिंसा हो । प्राचीन काल देखि नै पुरुष वर्गले महिलालाई आफनो निजी सम्पत्तिका रुपमा लिँदै आएको छ । शारीरिक रुपमा बलशाली हुनु र आफुलाई स्त्रीभन्दा अधिक श्रेष्ठ आंकलन गर्नु नारी हिंसा को प्रमुख कारण भएको समाज शास्त्रीहरु बताउँछन् । पुरुष प्रधान समाजको संरचनाले समाजको पनि नारी हिंसालाई बढावा दिएको छ। आज सम्म महिलाहरु आफनो बाच्ने अधिकार को स्वभाविक रुपले उपभोग गरेका छैनन् । घरेलु हिंसा यौन हिंसा दाइजो का लागी हिंसा छोरी भू्ण हत्या अफिसमा कार्यरत महिला सहभागी सँग उपशब्द्य प्रयोग वा यौन क्रियाकलापको अश्लील संकेतहरु बलात्कार बालविवाह विधवा चेलीबेटी किनबेच महिला हिंसा अन्तर्गत पर्ने बिषय हुन् । संसारमा प्रत्यक तीन महिला मध्य एक महिला हिंसाको सिकार हुन् पुग्छन् ।
आज सम्म एसिया का ५ करोड महिलाको हिंसा बाट ज्यान गैसकेको छ। विश्वमा घरेलु हिंसाबाट सिकार हुने महिला मध्य ४० देखी ७० प्रतिशत सम्मको मूत्यु उनकै पति वा पुरुषबाट भएको पाइन्छ । यो कुरा विश्व स्वाश्थ्य संगठन महिला हिंसा सम्बन्धी सन् २००० को रिपोटमा उल्लेख छ । सामान्य १५ देखी ४५ बर्ष सम्मको महिला आफनो जीवनमा एक न एक पटक पुरुष हिंसाको सिकार बनेकै हुन्छन् । पीडित नारीले कहिल्यै सामान्य जीवन बिताउन सक्दैनन आज हरेक ३३ मिनेटमा एक महिला हिंसा को सिकार भैरहेकी छिन् । हरेक आधा घन्टामा विश्वमा कही न कही कुनै महिला बलात्कृत भैरहेकी छिन् । नारी शोषणका नयाँ नयाँ विधीले वीभत्सता र अश्लीलताको सीमा पार गरिसकेको छन् । यसको रोक थाम र प्रतिकार कसरी हुन सक्छ ठूलो चुनौती पूर्ण विषय हो । अब समय आइसकेको छ । नारी हिंसा माथि अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक विचार र कार्यान्वयन दुवै होस । यसमा अब अकुश लगाउने समय आइसकेको छ । यसका लागी कानुन समाज पुरुष र नारी सबैको दुष्टिकोणमा ठुलो परिवर्तन आवश्यक छ । घरलु हिंसाका कतिपय मामिलामा पुरुषहरु प्रात्यशित पनि गर्छन् । त्यस्ता घटना फेरी नदोहोराउने किरीया पनि खान्छन् तर पटक पटक हिंसाको पुनरावृति भएकै हुन्छ ।
निर्मला पन्त प्रकरण : के त्यहाँ ‘शीतयुद्ध’ चलिरहेको छ ?
अविस्मरणीय सपना र नयागाउं मुक्तिनाथ धाम